Ungayakha Kanjani i-GIF Nge-LucidPix - Umhlahlandlela Olula
Akunandaba usho kanjani, I-GIF noma i-GIF, singabalandeli abakhulu befomethi yezithombe. Akumangazi ukuthi umqambi we-GIF ungenye yamathuluzi asetshenziswa kakhulu kuLucidPix. Lolu hlelo lokusebenza lwe-Android ne-iPhone lwenza kusheshe futhi kube lula ukudala ama-GIF ama-animated kunoma yisiphi isithombe osithandayo. Nasi umhlahlandlela osheshayo sendlela yokuguqula izithombe zakho ezijwayelekile zibe izithombe ezihamba ze-GIF ngeLucidPix.
Khetha isithombe ukuze Uguqukele ku-Moving 3D Photo GIF
Thwebula bese uvula uLucidPix futhi thepha isithonjana sekhamera phakathi ezansi kwesikrini sakho. Ukusuka lapha, ungakhetha noma yisiphi isithombe kusuka kufoni yakho ukwenza i-3D. Uma usitholile isithombe sakho, thepha ukuze ukhethe, bese uthinta Khiqiza isithombe se-3D .
Ukubuka kuqala i-GIF yakho ye-animated
Ngemuva kokuguqulwa okusheshayo kwe-3D, isithombe sakho esenziwe kabusha se-3D silungele ukubonwa kuqala. Qhubeka, sitsheke ifoni yakho ukuze ubone izinto ezizungeze futhi uhambe ngokuma komhlaba. Kwesinye isikhathi kuzwakala sengathi ubheka umzuzu wangempela ngesikhathi, hhayi isithombe esicaba nje!
Uma uthanda okubonayo, ungakuthumela ngokuqondile njenge-GIF enezithombe, noma ukwenze ngezifiso ngezihlungi noma ngombhalo we-3D.
Ukwenza ngokwezifiso ama-GIF
Manje yithuba lakho lokuthi wenze ngokwezifiso i-3D GIF yakho ngezihlungi zezithombe ezinjenge-Instagram futhi umbhalo ngokwezifiso we-3D. Thepha kusithonjana sokuhlunga futhi ungakhetha kokuhlunga okuningi okuguqula ukubukeka kwesithombe sakho se-3D. Ukwengeza umbhalo we-3D, thepha isithonjana sombhalo bese uthayipha ikhophi lakho.
Ukudala i-GIF yakho ye-animated
Uma usungeze noma yikuphi ukuhlunga nombhalo, ushiye imizuzwana kuphela ukudala i-GIF yakho. Swayipha ku-Abelana ukuze uhlu futhi thepha i-3D GIF isithonjana.
Lawula Ukuhamba kwe-GIF Yakho
Ngemuva kokuthepha i-3D GIF, ungakhetha ukuthi isiphi isivinini ofuna iGIF yakho ihambele kuyo, njengesitayela sokugqwayiza se-3D. Simply shayela umunwe wakho eceleni kwe-bar bar yokwandisa noma yehlise ijubane, futhi thepha izithonjana ezine zesitayela sopopayi ngezansi kwalelo bha ukuvivinya izinketho zokunyakaza ezahlukahlukene ze-GIF.
Gcina i-GIF yakho
Lapho usukhethile isivinini sakho osifunayo kanye nokunyakaza, thepha okuthi Gcina GIF isithonjana ukuze ulondoloze i-GIF kugalari yezithombe zefoni yakho! Ukusuka lapho, ungalayisha i-GIF kunoma yisiphi isithangamu semidiya yokuxhumana ukuze bonke basibone.
Manje njengoba usufundile ukuthi, landa kanjani i-LucidPix manje ukwenza i-GIF yakho!
Amathiphu Wokuthatha izithombe Zasendle Somaphakathi →← Izikhathi Omkhulu Kunazo Zonke Umlando wama-Olimpiki Ku-3D